Halo Infinite: Toro-hevitra sy fika tsara indrindra ho an'ny Multiplayer | la-manette.com
Halo Infinite: Torohevitra sy fika tsara indrindra ho an'ny Multiplayer
19 février 2021 feh JEAN-MICHEL CAPPIN
Na veteran franchise ianao na olom-baovao liana dia atombohy amin'ny tongotra havanana ny dianao lehibe.
Loharano: Studios Xbox Xbox
Ny fomba Multiplayer nyHalo Infinite azo alaina izao, maimaimpoana ho an'ny rehetra. Miaraka amin'ity fidirana mora vaovao ity amin'ny suite Multiplayer 343 Industries, maro ireo vao tonga sambany no sambany manao ny fiadiana MJOLNIR ary manandrana ny tanany amin'ny boaty fasika Halo. Mety ho taitra amin'ny fiovana sasany ihany koa ireo veterana andiany, indrindra raha ny momba ny fitaovam-piadiana hita ao amin'ny sarintany Halo Infinite.
Raha anisan'ireo Spartans ianao, na mpankafy efa hatry ny ela izay mila manala ny harafesina, dia efa voarakotry ny iray amin'ireo lalao Xbox tsara indrindra misy ianao. Ireto ny sasany amin'ireo toro-hevitra sy tetika Multiplayer Halo Infinite tsara indrindra izay hanakana anao tsy ho reraka amin'ny kianja na ady amin'ny ekipa.
Mampiasà plasma hanimba ampinga sy bala hanindrona ny fiadiana.
Loharano: Windows Central
Ireo veterana Halo dia mahafantatra sy mitazona ity singa ity ao am-pony, fa ho an'ireo vao tonga dia tena zava-dehibe izany. Ny fitaovam-piadiana Plasma, toy ny Plasma Pistol na Pulse Rifle, dia manimba kokoa ny ampinga, saingy kely kokoa ny fahasimbana rehefa ampidinina ny ampinga. Ny mifamadika amin'izany dia marina ho an'ny fitaovam-piadiana mifototra amin'ny bala na "kinetika" toy ny basy fanafihana na basy fiadiana, izay miady mafy hanindrona ny ampingan'ny mpilalao iray, saingy manaikitra azy fotsiny rehefa very ny ampingany. Ny Halo dia manana TTK (Time To Kill) avo kokoa noho ny lalao fitifirana maro, noho izany dia zava-dehibe ny fahafantarana izay tokony hampiasaina sy rahoviana.
Vakio ihany koa: RAID: Kaody Shadow Legends havotana (Janoary 2022)
Milalao ny fampianarana sy ny fanazaran-tena fitaovam-piadiana
Raha ny marina, makà fotoana hamakiana ny fampianarana ary indrindra ny fanazaran-tena. Betsaka ny fitaovam-piadiana vaovao ao amin'ny Halo Infinite ary mila zatra, indrindra ny fitaovam-piadiana toa ny Mangler, Shock Rifle, Skewer, ary Pulse Carbine. Ohatra, ny Shock Rifle dia mandefa herinaratra eo amin'ny mpilalao, izay tsy mora fehezina fa mety hanimba amin'ny adin'ny ekipa.
Ary koa, ny famerenana ny fitaovam-piadiana mahazatra dia mety ho hafa kely noho ny tadidinao, arakaraka ny lalao Halo nilalao vao haingana. Makà fotoana hamantarana ny fomba famerenan'ny entana, ny tahan'ny afo ary ny antsipiriany hafa. Noho izany dia tsy ho voasambotra ianao rehefa afaka maka fitaovam-piadiana mahery vaika amin'ny fomba Multiplayer.
Halo Infinite dia manolotra safidy be dia be hanamboarana ny traikefanao. Raha milalao amin'ny mpanara-maso ianao, dia mety ho sahiran-tsaina ihany ireo fanovana ireo. Manoro soso-kevitra vitsivitsy izahay Halo Infinite controller mba hahazoana antoka fa milamina sy mamaly ny lalao. Raha sahirana amin'ny fahazoana ny fahatsapana filalaovana tsara indrindra ianao dia andramo ireto fanovana ireto. Raha mbola tsy afaka mahazo fahatsapana lalao tsara ianao, dia manoro hevitra izahay ny hiditra amin'ny lalao mahazatra ary hanova ny fandrindrana tsirairay. Na dia mety haharitra kely aza ity fomba ity, dia fomba azo antoka hahitana ny fifandanjana mety amin'ny zavatra ilainao.
Vakio ihany koa: 10 endri-javatra tsara indrindra amin'ny Ubuntu 15.10 Wily Werewolf
Atsipazo ny voan'ny Hery
Soso-kevitra miavaka ity, raha heverina fa misy fiantraikany amin'ny fomba lalao iray ihany, fa tena ilaina ho fantatra izany. Rehefa manangona Seeds of Power amin'ny fomba Stockpile, mpilalao maro no manandrana maka iray ary miverina any amin'ny fotony. Satria tsy afaka mampiasa ny fitaovam-piadianao ianao rehefa mitondra voa iray, dia tsy misy fiarovana amin'ny firohondrohon'ny mpilalao. fahavalo izay miezaka manangona izany koa.
Raha tokony hihazakazaka ianao, raha vao mahazo Voan'ny Hery ianao dia atsipazo mankany amin'ny fotony. Scan mba hahazoana antoka fa tsy misy fahavalo manodidina, dia atsipy azy indray. Tsy maharitra ela ity dingana ity ary ho haingana kokoa ny fihetsikao rehefa tonga ny ekipan'ny fahavalo.
Ny mena dia mitovy amin'ny loza… sy ny fiara.
Loharano: Xbox Game Studios (fisamborana écran)
Ny ankamaroan'ny fiara ao amin'ny Halo Infinite dia mety ho tratran'ny loza, fa na ho ela na ho haingana, dia hisy fahasimbana ampy handondona azy rehetra. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, ny fiara dia hamirapiratra mena. Raha mbola ao anaty ianao dia izao no fotoana hitsambikinana, satria segondra vitsy monja vao mipoaka ny fiara ary mitondra anao miaraka aminy.
Izany hoe, raha toa ka tapa-kevitra ianao dia afaka mampiasa ireo segondra vitsy ireo mba hanandrana sy handresen-dahatra mpilalao fahavalo farany na handroso kely amin'ny tanjona iray. Manapa-kevitra ianao: tsy maintsy mampiasa amim-pahendrena io fotoana sarobidy io ianao.
Vakio ihany koa: Inona ny fampiharana Elara ary nahoana no manakana ny Windows tsy hikatona?
Ahoana ny fampiatoana ny fanavaozana mandeha ho azy Windows 10
Ahoana ny fampiasana ny fitaovana baiko DISM hanamboarana Windows 10 sary